Side Flexing Belts ထုတ်လုပ်သူများ - China Side Flexing Belts စက်ရုံ၊ ပေးသွင်းသူများ
19.05mm ခါးပတ်အစေး ခရုပတ်ဂ...
57.15mm 63.5mm ကြီးမားသော အစေး...
27.2mm 38.1mm အစေး နာမည်ကြီး...
၁လက်မ မော်ဂျူလာ ပလပ်စတစ် ခါးပတ်...
19.05mm belt pitch ခရုပတ် conveyor belt SS ကြိုးများ
HS-2200 Series Spiral Plate Chain Conveyors များသည် နေရာအနည်းဆုံးတွင် အထက် သို့မဟုတ် အောက်သို့ ချဲ့ထွင်ထားသော သယ်ဆောင်ခြင်းကို ရရှိနိုင်ပြီး နေရာအများအပြားကို သက်သာစေသည်၊ ထို့ကြောင့် အလိုအလျောက် ဂိုဒေါင်စနစ်၊ အတက်အကျ ကြမ်းပြင်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ယာယီသိုလှောင်ခြင်း၊ အအေးခံခြင်း စသည်တို့ကို ကောင်းစွာဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။
ပါးလွှာသော ဒီဇိုင်းကို ချမှတ်ကာ စုစုပေါင်း အလေးချိန် လျော့ကျသွားသော်လည်း ကြီးမားသော ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ရှိနေသဖြင့် သယ်ယူသူ၏ ပေါ့ပါးသော အလေးချိန်အတွက် ဝန်ထိရောက်မှု သက်ရောက်မှု ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံသည် ချောဆီနှင့် ထိန်းသိမ်းရန် လွယ်ကူသည်။ (သက်ဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနနှင့် တိုင်ပင်ပါ။)
အဖျော်ယမကာ၊ ပုံးပုံး၊ သိုလှောင်ရုံနှင့် ပစ္စည်းကိုင်တွယ်ခြင်း။
အအေးခံခြင်းနှင့် အေးခဲသောလိုင်းအတွက် 1လက်မကြိုးကွင်းပုံစံ မော်ဒူလာမျဉ်းကွေးခါးပတ်
1. အနိမ့်ဆုံးလှည့်ပတ်မှု (အတွင်းပိုင်း) သည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ခါးပတ်အကျယ်အားလုံးအောက်တွင် ခါးပတ်အကျယ်၏ 1.7-2.2 ဆဖြစ်သည်။
2. ပိုမိုကောင်းမွန်သော တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုဒီဇိုင်းကြောင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရလွယ်ကူသည်။
3. ဘေးတိုက်တည်ငြိမ်မှု တိုးလာခြင်းကြောင့် အထောက်အပံ့ အကန့်များ လျော့နည်းခြင်း။
4. Curved surface version သည် class-leading radius pull ကို ပေးပါသည်။
ဘေးထွက် ကွေးကွေး လှည့်နေသော ခါးပတ်
လူကြိုက်များသော ခါးပတ်ကွင်း ၁ လက်မ
အအေးခံခရုပတ်လိုက်တင်ယာ၊ အေးခဲနေသော ခရုပတ်သယ်ယူကိရိယာ၊ မုန့်ဆိုင်၊ ချောကလက်၊ ဘီစကစ်၊ စသည်တို့။
31.75 မီလီမီတာ ခါးပတ်အစေးသည် ဘေးထွက်လှည့်ပတ်မှုများပါရှိသော ပလပ်စတစ် မော်ဂျူလာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခါးပတ်
အနိမ့်ဆုံးလှည့်ပတ်ခြင်း (အတွင်းပိုင်း) သည် ခါးပတ်အကျယ်၏ 1.3-2.2 ဆ သည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ခါးပတ်အနံအားလုံးအောက်တွင်၊ 1.5- 2.5 ဆ ခါးပတ်အကျယ်သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
၎င်းတို့၏ တဲဘ်များသည် ခါးပတ်၏အောက်ဘက်အစွန်းတွင်ရှိသော ဘေးစွန်းစွန်းများဖြစ်ပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဧရိယာတွင် အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ ၎င်းကို ချည်နှောင်ရန်အတွက် အသုံးပြုသောကြောင့် ထုတ်ကုန်သည် အလှည့်များတွင် ခါးပတ်အကျယ်ကို ကျော်လွန်နိုင်သည်။
Modular curve conveyor၊ မုန့်ဆိုင်၊ အစားအစာ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
45mm ခါးပတ်အစေးဘေးဘက် flexing turning conveyor modular ခါးပတ်
• ထုတ်ကုန်အဆက်အသွယ်အနည်းဆုံးအတွက် ထူးခြားသောအချင်းဝက်ထိပ်မျက်နှာပြင်
• ပိုမိုခိုင်ခံ့မှု၊ မြန်နှုန်း သို့မဟုတ် ဝန်အားပိုမိုရရှိရန်အတွက် အားဖြည့်ထားသော သံမဏိလင့်ခ်များ
• အထူးမျက်နှာပြင် – မျိုးစပ်ခါးပတ်ဖြေရှင်းချက်
• အစားထိုးနိုင်သော အစွန်းအဝတ်များ
မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်း၊ ကော်ဇောကတ်ထူပြား၊ လှည့်ပတ်ကိရိယာ
အနိမ့်ဆုံးလှည့်ပတ်အချင်းဝက် (အတွင်းပိုင်း) သည် ခါးပတ်အကျယ်၏ 1.1-2 ဆဖြစ်ပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ခါးပတ်အနံအောက်တွင် ခါးပတ်အကျယ်၏ 1.3-2.2 ဆသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အအေးမြန်ခြင်း သို့မဟုတ် အေးခဲခြင်းအတွက် ကျယ်ဝန်းသော ဧရိယာ။
ခရုပတ် conveyors များအတွက်စံပြဖြေရှင်းချက်
အသား အစားအစာ ပြုပြင်ခြင်း ၊ အအေးခံ ခရုပတ် သယ်ယူ ၊
အလုပ်ချိန်08:30~18:00 တနင်္လာမှ စနေနေ့